Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Nambara ireo mpandresy amin'ny WTM Responsible Tourism Awards
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • fivoriana • Tourism • Travel Wire News • Vaovao farany momba ny UK
Nambara ireo mpandresy amin'ny WTM Responsible Tourism Awards.
Nambara ireo mpandresy tamin'ny WTM Responsible Tourism Awards, mankalaza ny tsara indrindra amin'ny fampiharana manerana an'izao tontolo izao.
Ireo mari-pankasitrahana, natomboka voalohany tamin'ny taona 2004, dia manaiky sy manome valisoa ho an'ireo orinasa sy toerana izay mandray anjara amin'ny indostrian'ny fizahantany maharitra sy tompon'andraikitra.
Ireo mpandresy dia nofidin'ny vondrona manam-pahaizana manokana momba ny indostria, izay nihaona tamin'ny Internet mba hanomezana sehatra iraisam-pirenena isan-karazany.
Tamin'ity taona ity, nisongadina tamin'ny Loka nipoitra ho firenena voalohany ho an'ny fizahantany tompon'andraikitra i India.
Nahita ny tombontsoa tao Kerala ny fanjakana indiana tamin'ny ezaka nataon'ny Misionan'ny fizahantany tompon'andraikitra izay niasa hatramin'ny taona 2008.
Ireo mpandresy amin'ny Global Award dia nofantenana avy amin'ny tsara indrindra any India sy ny sisa amin'ny loka manerantany miaraka amin'ireo tsara indrindra amin'ireo efa niditra ho an'i Afrika sy Amerika Latina.
Miaraka amintsika ny fiovaovan'ny toetr'andro. Zavatra tsy maintsy ianarantsika hiainana izany ankehitriny. Ny fiovan'ny toetr'andro dia hisy fiantraikany lehibe amin'ny orinasa eo amin'ny sehatra misy antsika sy ny olona ary ny bibidia any amin'ny tsena sy toerana haleha.
Tsy maintsy mitady fomba hampihenana ny habetsahan'ny karbaona avoakan'ny olona mandeha sy amin'ny fialan-tsasatra ihany koa isika.
Tsy maintsy manova ny famokarana sy ny fanjifana fizahan-tany isika – ny fitsangatsanganana, ny trano fandraisam-bahiny, ny fialam-boly ary ny hetsika rehetra dia mila mihetsika mba hampihenana ny entona mandatsa-dranomaso.
Amin'ny alàlan'ny Loka dia tianay ny hampiseho ohatra momba ny teknolojia, ny rafitra fitantanana ary ny fomba fanovana ny fitondran-tenan'ny mpanjifa izay nampihena ny entona mandatsa-dranomaso.
Naneho hevitra ireo mpitsara ho an'ny loka maneran-tany fa nisy sehatra matanjaka kokoa tamin'ity taona ity ary naniry ny hanantitrantitra ny maha zava-dehibe ny famokarana herinaratra madio sy izay azo atao, amin'ny alàlan'ny fandraisana vahaolana ara-teknika, mba hahatratrarana ny fihenan'ny entona tena izy sy lehibe.
Govardhan Village dia ivon-toeram-pisakafoanana mirefy 100 hektara ary vondrom-piarahamonin'ny toeram-pambolena modely, toeram-pianarana iray izay mampiseho ny teknolojia hafa ary manome fihaonambe sy fandaharam-pianarana ho an'ny trano fonenana, mahasarika mpizahatany 50,000 isan-taona. Nampiaiky volana manokana ny mpitsara ny ezaka natao tao Govardhan mba hisorohana ny fivoahana amin'ny dingana fananganana sy fampandehanana. Miaraka amin'ny famoahana aotra, 210kW amin'ny panneau solaire dia manome herinaratra 184,800 isan-taona.
Ny ozinina biogaz dia mamadika tain'omby sy fako mando hafa mitovy amin'ny 30,660. Ny orinasa pyrolysis dia manodina ny fako plastika ho lasa solika 18,720 litatra gazoala maivana 52,416 units. Ny fanaraha-maso ny angovo dia mamonjy 35,250 isa.
Ny orinasa Soil Bio-Technology dia manodina ny maloto ho rano maloto ampiasaina amin'ny fanondrahana, mitahiry 247,000 singa ilaina amin'ny fanondrahana rano avy amin'ny renirano ary ny fijinjana ny ranonorana dia ampy mandritra ny volana maromaro aorian'ny vanim-potoanan'ny orana. Ny tranobe ao amin'ny campus dia naorina avy amin'ny compressed earth blocks (DSEB). Raha mandany angovo 75 MJ ny rindrina biriky mahazatra, 0.275 MJ fotsiny ny rindrina CSEB ao Govardhan; ny fitaovana rehetra dia avy ao anatin'ny 100km mba hampihenana ny entona karbônina avy amin'ny fitaterana.
Famelomana ny mpiasa sy ny vondrom-piarahamonina mandritra ny areti-mifindra
Fantatsika fa mbola lavitra ny fiafaran'ny valan'aretina, ary araka ny ampahatsiahivan'ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana antsika dia tsy milamina isika raha tsy efa salama daholo. Haharitra volana maromaro vao miverina amin'ny laoniny ny dia sy ny fialan-tsasatra amin'izay mety ho "normal vaovao". Fantatsika fa orinasa sy fikambanana maro ao amin'ny sehatry ny fizahantany sy fizahan-tany no niasa mafy mba hanohanana ny mpiasany sy ny vondrom-piarahamonina misy azy ireo izay misy fiantraikany tsara eran'izao tontolo izao. Maro amin'ireo ezaka ireo no nandraisan'ny hafa ny rojo famatsiana sy ny mpanjifany.
Tianay ny hamantatra sy hisarihana ny saina ho an'ireo izay nahomby tamin'ny fanampiana ny hafa, ny mpiasa na ny mpiara-monina, mba hiaritra ny tafio-drivotra.
Ny V&A Waterfront dia mampiseho izay mety ho tratra amin'ny orinasam-pamokarana midadasika izay tapa-kevitra ny hiasa amin'ny fampiasana ny haavony sy ny fanjakazany mba hahasoa ireo izay voahilika sy voahilikilika.
Ny V&A Waterfront dia toerana azo ampiasaina amin'ny seranan-tsambo ao Cape Town, "sehatra iray manamora sy mampiroborobo ny zavakanto sy ny famolavolana, hanohanana ny fandraharahana sy ny fanavaozana, hitarika ny fiampangana amin'ny faharetana ary hitondra fiovana ara-tsosialy sy ara-toekarena tsara."
Nitombo hatrany ny asa tamin'ny 3.7% isan-taona nandritra ny valan'aretina. Tamin'ny Desambra 2020, rehefa nitombo ny raharaha, dia nanangana ny Makers Landing izy ireo, vondrom-piarahamonina sakafo izay mankalaza ny kolontsaina samihafa any Afrika Atsimo amin'ny alalan'ny sakafo.
Misy lakozia incubator iombonana, lakozia demo, tobim-pamokarana mpanamboatra valo, tsenan-tsakafo misy toeram-pivarotana flexible 35 eo ho eo, toeram-pisakafoanana madinika valo ary trano fisakafoanana vatofantsika dimy amin'ny habe samihafa. Mifantoka amin'ny mpandraharaha eo am-piandohana (manomboka, maniry ary eny ifotony) manana fahafahana voafetra amin'ny loharanon-karena ao amin'ny sakafo fonosina, serivisy sakafo ary indostrian'ny sakafo. Ho fanampin'ny orinasa madinika vatofantsika 17, asa vaovao 84 ary orinasa vaovao valo no noforonina, 70% ny mainty hoditra, 33% ny vehivavy no mitarika.
Izy ireo dia nitazona fandaharam-pampianarana sy fanofanana, nanome fanampiana (R591,000) sy sakafo R1.3m) ary nanohy namatsy ny Justice Desk tao amin'ny tanànan'i Nyanga.
Mba hanohanana ny fihazonana ny asa ao amin'ny SMME, dia nanangona renivola miasa izy ireo mba hanohanana orinasa 49, mitentina R2.52 tapitrisa, manohana asa maharitra 208 ary asa vonjimaika 111 ary nanome fidirana amin'ny famakafakana sy fanohanana ny vola ary fanampiana hofan-trano R20 tapitrisa ho an'ireo mpanofa azy 270. Avy amin'ny zaridainan'izy ireo an-tanàn-dehibe no nanomezan'izy ireo ny Ladies of Love, programa sakafo ao an-tanàna izay manome sakafo ho an'ny olona sahirana, legioma latsaky ny 6 taonina, izay sakafo 130 000 no natolotra tao amin'ny lakozia 12 tao anatin'ny roa taona. Ny V&A Waterfront dia mety hisy fiantraikany lehibe; manao izany.
Nampiaiky volana manokana ny mpitsara ny fomba fiasany vaovao sy ny fahavononana mafy hanohizana hampitombo ny fahafahana ho an'ireo vondrom-piarahamonina sahirana sy voahilikilika.
Miorina tsara kokoa ny toerana haleha aorian'ny Covid
Tamin'ny Loka tamin'ny taon-dasa dia nahita toerana maromaro izay nanomboka nieritreritra indray ny habetsahan'ny mpizahatany sy ny tsenan'ny tsena izay hisarihana azy ireo taorian'ny Covid sy ny sasany izay nieritreritra ny hanimba. Ny fitomboana toa tsy azo ihodivirana amin'ny isan'ny mpitsidika dia natsahatra noho ny areti-mifindra. Toerana maro no nanana "fofonaina". Fampahatsiahivana ny toerana nisy azy ireo talohan'ny nahatongavan'ireo andian-jiolahy. Fotoana iray handinihana indray ny fizahantany ary mety hanapa-kevitra ny hampiasa ny fizahantany fa tsy hampiasa azy.
Iray amin'ireo tanjon'ny Loka ho an'ny fizahantany tompon'andraikitra ny famporisihana ny orinasa sy ny toerana haleha hianatra amin'ny hafa, hamerina sy hanamafy ny zava-bita. Ny mpitsara tamin'ny Global Awards dia naniry ny hamantatra sy hankalaza ny fomba fisintonan'i Madhya Pradesh amin'ny fianarana avy amin'ny hafa, indrindra fa ny Misionan'ny Fizahantany tompon'andraikitra ao Kerala, mba hanafainganana sy hampitombo ny fiantraikany amin'ny vondrom-piarahamonina ambanivohitra.
Ny Programan'ny fizahantany ambanivohitra an'ny Madhya Pradesh Tourism Board dia ampiharina amin'ny tanàna 60 amin'ny dingana voalohany ary 40 amin'ny dingana faharoa mandritra ny telo taona. Ity tetikasa ity dia manome ny mpizahatany ny traikefa ambanivohitra tena izy sy manakorontana indrindra amin'ny alàlan'ny hetsika ambanivohitra maro toy ny fandehanana sarety omby, ny fambolena sy ny traikefa ara-kolontsaina ary ny fahafahana mijanona amin'ny trano fonenana any ambanivohitra mba hamoronana asa sy fandraharahana hafa ho an'ny vondrom-piarahamonina ambanivohitra.
Fitsidihana fampirantiana sy fanofanana mifototra amin'ny fikarakarana homestay, fandrahoan-tsakafo, fahasalamana sy fahadiovana, fitahirizam-boky sy kaonty, fikarakarana trano, fitantanana trano fandraisam-bahiny, fitarihana, fahatsapana ho an'ny mpandeha, sary ary bilaogy. Ny fahatongavan'ny mpizaha tany dia niteraka asa ho an'ny mpitari-dalana, mpamily, mpanakanto, ary fahafahana hafa hivarotra entana sy serivisy amin'ny mpitsidika. Ny mpanao asa tanana ao an-tanàna ihany koa dia mirotsaka amin'ny fampitomboana ny toe-karena eo an-toerana amin'ny alàlan'ny fampiroboroboana ny asa tanana sy ny fampiroboroboana amin'ny alàlan'ny fandaharan'asa fampandrosoana fahatsiarovana.
Ny ivon'ny tetikasa dia ny fanoloran-tena amin'ny fampidirana, "Iray ary ny rehetra dia tokony hahazo ny anjarany ara-drariny". Miara-miasa amin'ny panchayats izy ireo mba hifaneraserana amin'ny olona na inona na inona ara-tsosialy (ara-batana, fahaiza-mamaky teny, lahy sy vavy, fahaiza-manao, sakana ara-pivavahana, kolontsaina, sns.) sy ny toe-karena (fananan-tany, tahan'ny fidiram-bola, fidirana amin'ny serivisy izay manatsara ny fahafahana ara-toekarena, sns.)
Fampitomboana ny fahasamihafana eo amin'ny fizahantany: Manao ahoana ny maha-zava-dehibe ny indostriantsika?
Mandeha manandrana kolontsaina sy vondrom-piarahamonina ary toerana hafa izahay. Raha toa ka mitovy daholo ny toerana rehetra, nahoana no mandeha? Na dia mikatsaka fahasamihafàna amin'ny alalan'ny dia aza izahay, dia tsikaritray fa tsy hita taratra foana ny fahasamihafàna ao amin'ny orinasa manampy ny hafa hanana traikefa toy izany. Ny fahasamihafana dia teny midadasika: "Ny maha-izy azy dia ahitana, fa tsy voafetra amin'ny, ny fahaiza-manao, ny taona, ny foko, ny maha-lahy sy ny maha-vavy, ny fifindra-monina, ny fahasamihafan'ny saina, ny fiaviana, ny firazanana, ny fivavahana, ny firaisana ara-nofo, ary ny fironana ara-pananahana.
Tsy manantena izahay fa hahita fikambanana nanao fandrosoana azo tsapain-tanana tamin'izany rehetra izany tato anatin'ny taona vitsivitsy. Ho an'ny indostriantsika, momba ny olona ampiasaintsika amin'ny ambaratonga isan-karazany izany, amin'ny tsenantsika, ny fomba fanolorana ny toerana amidintsika, ny traikefa fampiroboroboanay ary ny tantara tantarainay. Manao ahoana ny taratry ny fahasamihafan'ny toerana amidinay?
Ity sokajy ity dia vaovao amin'ny Loka amin'ity taona ity, ary nahazo lahatsoratra tena samihafa izahay.
Nampiaiky volana ny mpitsara ny fahasamihafan'ny traikefa atolotry ny No Footprints momba ny fiainana ankehitriny ao Mumbai, izay manome fahatakarana marina ho an'ireo mpandeha sy mpiala sasatra. Izy ireo dia nekena ho Best Tour Operator ao amin'ny India Responsible Tourism Awards tamin'ny 2020: "No Footprints dia ahafahan'ny mpitsidika mifandray amin'ireo vondrom-piarahamonina izay nahatonga ny tanàna ho toy ny taranaka maro, hihaona amin'izy ireo ary handre ny tantarany. No Footprints dia manome fahafahana hihaona amin'i Parsees, Bohris, Indianina Atsinanana ary ny vondrom-piarahamonina hafahafa. Tamin'ny taona 2021 dia nekena tao amin'ny WTM Global Responsible Tourism Awards izy ireo.
No Footprints dia mirakitra traikefa fitsangatsanganana manokana ho an'ny mpandeha. Nandritra ny enin-taona farany, nanamboatra traikefa roa amby roapolo samy hafa tao Mumbai izy ireo ary miitatra any Delhi izao. Ny tanjon'izy ireo dia ny hampahafantatra ireo mpandeha amin'ny tantara, ny kolontsaina ary ny vahoaka samihafa ao Mumbai sy Delhi. Anisan'ny fitsangatsanganan'izy ireo malaza indrindra ny Mumbai amin'ny maraina, ny fandehanana an-dalambe eny an-dalambe, ny tanànan'ny fanjonoana Worli, ny Colonial Walk ary ny fitsidihan'izy ireo zava-baovao natao hanintonana ireo saina dimy, ny fahitana ary ny feo, anisan'izany ny traikefa manokana momba ny Bollywood, ny tsiron'ny saran-dalana Konkan, ny hanitry ny tsenan'ny zava-manitra ary hikasika an'i Mumbai amin'ny alalan'ny hetsika ao amin'ny foibem-piarahamonina na amin'ny firesahana amin'ny fiarandalamby feno olona.
Manolotra atrikasa zavakanto sy fahandroan-tsakafo izy ireo, fitsangatsanganana tsingerin-taona lova ary fahafahana hiaina ny fientanentanana amin'ny cricket. No Footprints dia manitatra ny karazana fitsangatsanganana atolotra ho an'ny mpandeha sy ny hamafin'ny traikefa omeny. Ny fitsangatsanganana Queer*-namana dia atolotry ny orinasa isan-karazany manerana an'i India. Tsy misy Footprints mihoatra noho ny maha pelaka. “No Footprints' Queer's Day Out dia manolotra andro feno filalaovana fitia amin'ny lafiny samihafa izay mandrafitra ny fiainan'ny olona Queer ao an-tanàna. Ny fitsidihana dia ahitana fitsidihana ny tempolin'ny andriamanibavy ivavahan'ny vondrom-piarahamonina transgender nentim-paharazana izay mamorona fahafahana hiresaka momba ny fitsangatsanganana sy ny Grindr, Pride, Coming Out and Drag. Ny olona Queer dia mandrindra sy mitarika ny fitsangatsanganana, miantoka ny maha-azo itokiana sy manome fahafahana ny mpizaha tany hahafantatra ny kolontsaina Queer ao an-tanàna.
Ny fampihenana ny fako plastika amin'ny tontolo iainana
Ny valan'aretina Covid-19 dia nampitombo be ny habetsaky ny plastika ampiasaina tokana, manampy amin'ny krizy fako plastika. Ny fako plastika ankehitriny dia miditra amin'ny rojo sakafon'ny karazana hafa ary koa ny antsika. Raha vao miditra amin'ny lalan-drano ny plastika, dia miafara amin'ny gyros of fako any an-dranomasina, eny amoron-dranomasina ary any amin'ny vavonin'ny trondro hohanintsika avy eo. Mila manao zavatra bebe kokoa ny indostria mba hampihenana ny fampiasana plastika tokana ary handray andraikitra ary hiara-hiasa amin'ny vondrom-piarahamonina eo an-toerana sy ny governemantany mba hisambotra plastika fako miaraka amin'ny harato sy sakana mitsingevana ary hanova azy ho toy ny cobbles, fanaka ary asa tanana.
Nampiaiky volana ny mpitsara maneran-tany ny fomba maro niasan'ny mpitantana mba hampihenana ny fampiasana plastika ao amin'ilay toeram-pialan-tsasatra sy hanovana ny rojo famatsiana azy ireo mba hanafoanana ny plastika.
Ao amin'ny Six Senses Resort ao amin'ny nosy Laamu Maldivian, ny vahiny dia manatevin-daharana ny Fitetezam-paritra Maharitra mba hijery ny zava-baovao sy ny fanandramana miasa ao amin'ny Earth Lab, toerana misy ny fahaleovan-tena sy ny fako tsy misy fako. Ny toeram-pialan-tsasatra dia nametraka ny tenany ho tanjona ho lasa tsy misy plastika amin'ny taona 2022. Anisan'izany ny plastika eo anoloana rehetra fa ny fonosana sakafo ihany koa. Ny iray amin'ireo fanamby lehibe indrindra nataon'izy ireo dia ny boaty styrofoam izay ampiasain'ny mpanjono eo an-toerana mba hitahirizana ny hazandrano alohan'ny hitondrana azy any amin'ny toeram-pialan-tsasatra, ny mpiasa dia niara-niasa tamin'ny mpamatsy fonosana sy ny mpanjono eo an-toerana ary ankehitriny dia manana sakafo aterina any amin'ny toeram-pialan-tsasatra amin'ny baoritra vita amin'ny baoritra anatiny. amin'ny hemp, jute, ary fibre hazo, 100% biodegradable sy komposta ary manafoana boaty styrofoam 8,300 isan-taona. Amin'ny alàlan'ny osmosis mivadika arahin'ny fanadiovana ultraviolet, ny ranon-tsira voasivana dia voadio, diovina ary natao ho an'ny fandroana sy ny fisotroana ao anaty tavoahangy fitaratra.
Manome anana sy anana 40 isan-karazany ny Zaridainan'izy ireo, ary ny 'Kukulhu Village' dia manome atody sy akoho ho an'ny trano fisakafoany. Amin'ny alàlan'ny fijinjana ny kojakoja ao amin'ny nosy, ny toeram-pialan-tsasatra dia afaka mampihena be ny fonosana sakafo plastika. Mivarotra fitaovana tsy misy plastika ao amin'ny trano fivarotana izy ireo, izay ahitana tavoahangy rano azo ampiasaina, kitapo azo ampiasaina, borosy nify volotsangana ary pensilihazo hazo. Ny vahiny dia andefasana toro-hevitra momba ny famonosana miangavy ny vahiny hamela vokatra plastika azo ampiasaina ao an-trano ary hitondra fako plastika any an-trano izay azo averina tsara kokoa. Ny harato nilaozan'ny fanjonoana, voasasa eny amoron-dranomasina, dia amboarina.
Ny dimampolo isan-jaton'ny fivarotana rano ao amin'ny toeram-pisakafoanana Six Senses Laamu rehetra dia miditra amin'ny tahirim-bola manome rano fisotro madio sy azo antoka ho an'ireo vondrom-piarahamonina eo an-toerana sahirana. Six Senses Laamu dia miavaka amin'ny fametrahana sivana rano ampy (97) ao amin'ny vondrom-piarahamonina eo an-toerana mba hanafoanana tavoahangy plastika 6.8 tapitrisa isan-taona. Nanao fanadiovana tora-pasika sy haran-dranomasina maherin'ny 200 koa izy ireo - anisan'izany ny fandefasana angon-drakitra ho an'ny Project AWARE- ary nanao fotoam-pampianarana ho an'ny vahoaka rehetra momba ny fandotoana plastika sy ny fitantanana ny fako.
Fampitomboana ny Tombontsoa ara-toekarena eo an-toerana
Mbola misy ihany koa ny toerana ho an’ny CSR1.0 sy ny filantropa, araka ny hita tamin’ny taona lasa teo amin’ny fanohanana ny mpiasa sy ny fiaraha-monina amin’ny alalan’ny sokajy Pandemic. Na izany aza, amin'ny alàlan'ny fampifanarahana ny fomba fiasan'izy ireo, ny mpanome trano fonenana sy ny mpitety faritany dia afaka mamorona tsena fanampiny ho an'ny vondrom-piarahamonina eo an-toerana ao amin'ny rojo famatsiana ary mamorona fahafahana mivarotra entana sy serivisy mivantana amin'ny mpizaha tany.
Izany dia mampiovaova ny toe-karena eo an-toerana ary mampanan-karena ny toerana haleha amin'ny lafiny roa, mamorona fivelomana fanampiny ho an'ny mponina eo an-toerana sy karazan-javatra maro kokoa, sakafo sy zava-pisotro ary asa tanana sy vokatra ho an'ny mpizaha tany. Afaka manampy ireo fiovana ireo ny toerana haleha amin'ny alalan'ny fanomezana vola madinika, fanofanana ary fanofanana, famoronana tsena sy sehatra fampisehoana ary fanomezana fanampiana ara-barotra.
Tao anatin'ny tontolon'ny areti-mifindra dia nitady orinasa niasa mavitrika hanohana sy hampivelatra ny fifandraisana misy eo amin'ireo vahiny teo aloha sy mety ho tonga ny mpitsara maneran-tany, amin'ny fampiasana tolo-kevitra sy fanondroana mba hamoronana orinasa ao an-toerana sy iraisam-pirenena amin'ny alàlan'ny fitsangatsanganana virtoaly. Nanamboatra ny orinasany izy ireo ary nanatsara ny fahaiza-manaon'ny mpiasany ao amin'ny biraon'ny Mumbai mba hahazoana antoka fa ny Village Ways dia afaka mivoaka amin'ny areti-mifindra.
Rehefa namely ny Covid dia nijanona ny fizahan-tany. Village Ways namboarina tamin'ny alàlan'ny famolavolana fitsangatsanganana virtoaly miaraka amin'ireo vondrom-piarahamonina vohitra, anisan'izany ny fihetsiketsehana mahandro, ny fitsangatsanganana virtoaly tsirairay dia nahasarika mpandray anjara manodidina ny 200, matetika nanavao ny olom-pantatra taloha manerana ny etera. Nahomby ny Village Ways tamin'ny fahazoana fifanarahana fiofanana avy amin'i Madhya Pradesh. Namboarin'izy ireo ny rafitra, nanidy ny biraon'ny varotra any UK, mikasa ny hampiakatra ny ezaka ara-barotra any Angletera, ary mampitombo bebe kokoa ny fahaizan'ny birao foibe ao Mumbai.
Manangana voalohany avy amin'ny tsena anatiny indiana izy ireo. Ny modely Village Ways dia miavaka. Ny vahiny dia asaina mandehandeha eny amin'ny faritra mitety vohitra miaraka amin'ny mpitari-dalana eo an-toerana mijanona ao amin'ny trano fandraisam-bahiny an-tanàna, manana, mitantana ary miasa amin'ny fiarahamonina. Ny komitin’ny fokontany rehetra izay mitantana ny trano fandraisam-bahiny dia miasa mangarahara.
Nanomboka ny Village Ways ny tetikasa Binsar tamin'ny 2005, niara-niasa tamin'ny tanàna dimy. Miara-miasa amin'ny tanàna 22 izy ireo ankehitriny manome tombontsoa ara-toekarena sy ara-tsosialy azo tsapain-tanana, miaraka amin'ny fahafahana miasa ho an'ny tanora izay mety hifindra monina any an-tanàn-dehibe. Ny fidiram-bolan’ny fizahantany dia mameno fa tsy manolo ny fidiram-bola hafa mba tsy handaozan’ny tokantrano ny asa mahazatra toy ny fambolena. Mampiroborobo ny fitovian'ny lahy sy ny vavy sy ny fampidirana ny fiaraha-monina ihany koa izy ireo.